T 3 TOMBONANDRO. Ro iny T 3 TENA MANOKANA Reseho lahatra ny mambra mba hanao lisitry ny zavatra atao ( emploi du temps ): Isan’ andro Isan- kerinandro. - ppt download
Published byHamelet Vigouroux Modified over 3 years ago
Presentation on theme: "T 3 TOMBONANDRO. Ro iny T 3 TENA MANOKANA Reseho lahatra ny mambra mba hanao lisitry ny zavatra atao ( emploi du temps ): Isan’ andro Isan- kerinandro."— Presentation transcript:
1 T 3 TOMBONANDRO
2 Ro iny T 3 TENA MANOKANA Reseho lahatra ny mambra mba hanao lisitry ny zavatra atao ( emploi du temps ): Isan’ andro Isan- kerinandro Ary asaivo mijoro vavolombelona amin’ny fanandramany.
3 Ro iny T 3 TENA MANOKANA Mba hisorohana ny fandanilaniana foana ny fotoana dia « Hevero hoe io no andro farany hahavelomanao » Manaova tombana isan- kariva alohan’ny hatory: ataovy lisitra ny zavatra vitanao t@ iny andro iny.
4 T 3 Atombohy ara-potoana ny zavatra rehetra. Aza ahemotra ny fanaovana izay efa azo atao.
5 T 3 TOMBONANDRO ATELIER = DINIKA
6 T 3 TOMBONANDRO Manokana fotoana manokana iarahan’ny fiangonana midinika mikasika ireto:
7 T 3 ATELIER = DINIKA 1/Inona no antony maha- tara ny fanombohan’ny fotoana? 2/Inona no vahaolana heverinao hanombohana ara-potoana? 3/Ahoana no hanombohana miaraka?
8 T 3 ATELIER = DINIKA Zarao vondrona maromaro ny fiangonana ka 12 no mambra ao amin’ny vondrona iray mifanakalo hevitra mikasika ireo.
9 T 3 ATELIER = DINIKA Manendry olona iray isaky ny vondrona hitarika ny dinika. Manendry mpitan-tsoratra iray handray an-tsoratra ny hevitra rehetra sy hanao ny tatitra eo anatrehan’ny fiangonana avy eo.
10 T 3 ATELIER = DINIKA 15 minitra no omena ny fiangonana ka 5minitra isaky ny fanontaniana.
11 T 3 ATELIER = DINIKA Tsy iadian-kevitra ny hevitra aroson’ny olona tsirairay ao anaty vondrona fa soratana avy hatrany izay lazainy.
12 T 3 ATELIER = DINIKA Rehefa tapitra ny 15 minitra: Mifandimby manao tatitra ny mpitan- tsoratry ny vondrona isanisany.
13 T 3 ATELIER = DINIKA Angony ireo taratasy nanoratany ireny hevitra irany ka diniho ny fampiharana.
14 T 3 ATELIER = DINIKA Fintino ny tatitra ary manaova antso ny amin’ny 1/Fanombohana ara-potoana sy 2/Fahatongavana ara-potoana.
15 T 3 Manokàna fotoana itondrana am-bavaka ny fanapahan-kevitra sy itondrana am- bavaka ireo fianakaviana tara- lava. ( séance de prière)
16 T 3 Atombohy ara-potoana ny fotoana rehetra. Aoka tsy andrasana i Andriamatoa TSITONGA sy Ramatoa RATARA.
17 T 3 ATELIER = DINIKA Nahoana ny olona no matahotra rehefa tara any am-piasana? Nahoana no tsy rototra izy rehefa tara any am-piangonana?
18 T 3 ATELIER = DINIKA Iza no heverinao fa tsy tokony hanaovana tara : Toeram- piasana Toeram- pianarana Fotoam-pivavahana
19 T 3 Amporisiho ny fiangonana hahay hampiasa ny ANDRO FIOMANANA Jereo Torolalana ho an’ny Fiangonana, pp.121-134
20 T 3 MANOKANA SABATA IRAY ( Fetin’ny fijoroana vavolombelona ) 09/03/2013 MANOMBOKA ARA- POTOANA miaraka ny mambra rehetra.
21 T 3 Izany hoe: Dingana voalohany: Entanina aloha ny fanombohana ara-potoana. Mety ho vitsy ny mambra tonga miara-manomboka. Dingana faharoa: Miara-manomboka ara- potoana amin’ny 09/03/2013 Sabatan’ny FI.PI.KRI
22 T 3 Miverina Sabata hariva avokoa ny mambra amin’io. Fetin’ny fijoroana vavolombelona io folakandro io. ( Festival de temoignage ) Ataovy matanjaka ny fanentanana mialoha. Ampiasao ny fomba rehetra sy ny herivelona rehetra.
23 T 3 SABATA HARIVA( Ny atao ) : fifampizarana fanandramana sy ny fahatsapan’ ny fiangonana ary ny fahitany izany manomboka ara- potoana izany
Download ppt "T 3 TOMBONANDRO. Ro iny T 3 TENA MANOKANA Reseho lahatra ny mambra mba hanao lisitry ny zavatra atao ( emploi du temps ): Isan’ andro Isan- kerinandro."
Ppt on time series analysis using spss Ppt on rain water harvesting download Mp ppt online counselling 2013 Ppt on as 14 amalgamation process Ppt on bluetooth with slides Climate change for kids ppt on batteries Ppt on field study 4 Ppt on minimum oil circuit breaker Ppt on different solid figures songs Ppt on population census 2011